ရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါဖောက်လာရင် တစ်မိနစ်အတွင်း အသက်ကယ်နည်း by popolay.com
The XFactor Myanmar
Miss Myanmar World 2018 ပြိုင်ပွဲဝင် အလှမယ်တွေရဲ့ ခံစားချက်များ
ဘေကျင်းကားပြပွဲတွင် လျှပ်စစ်ကားများ ကြီးစိုးနေ
MRTV4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသစ် “အရိပ်”
မျက်နှာကျက်အမိုး ပြုတ်ကျမှုကြောင့် လူ ၉ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
၈ နှစ်သမီးကို အုပ်စုဖွဲ့မုဒိန်းကျင့်မှုမှ လွတ်မြောက်နေသော တရားခံပြေးအားဖမ်းဆီးရမိ
ATM စက်ထဲမှ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ပိုက်ဆံများ ကြွက်ကိုက်ဖျက်ဆီးခံရ
၃ နှစ်သမီးလေး မိသားစုနဲ့ခရီးသွားနေရာမှ ရုပ်တရက် လေဖြတ်
သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးကို ဓါးနဲ့ခုတ်သတ်ပြီးမှ ရဲစခန်းတွင် အဖမ်းခံသူ
သိန်းတစ်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြားများကိုမန္တလေးတွင် ဖမ်းမိ
ကောလင်းမြို့ နာရေးအလှူမှာ လူ ၄၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲများ ပြသမှုနေမှုများနဲ့ပက်သက်ပြီး SkyNet က သတိပေးပြီ
လိုင်းပေါ်မှာ ပုံစံအသစ်နဲ့ စီးပွားရှာလိုက်တဲ့ ဖေ့ဘွခ်ဆယ်လီ
အမျိုးသမီးများ အရှက်သိက္ခာမဲ့ကြောင်း ရိုက်ကူးသော ရုပ်သံကြော်ငြာ ပိတ်ခံရ
‘ဝ’တဲ့အမျိုးသမီးတွေကို အခမဲ့ဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ ဘက်စုံကစားကွင်း
မိခင်ရဲ့နာရေးကို သင်္ဂြိုလ်ရာမှ သားဖြစ်သူ ခေါင်းတလားပိကာ သေဆုံး
ချစ်သူအဖြစ် လုံးဝလက်မခံသင့်တဲ့ လူမျိုး
ဘဝမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားဖို့ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ့် အရာတွေ
ခပ်ချေချေပဲ - ခင်သဇင်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အဆင်ဘယ်လိုရွေးကြမလဲ..?
ဆီးကျောက်တည်ခြင်းကို ဒီနည်းလမ်းနဲ့ အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ
ခြင်ကတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါဆန်းတစ်မျိုး ယူဂန်ဒါတွင် ဖြစ်ပွား
ရင်သားပြုပြင်မှုမတိုင်မီ အကြိုကြည့်ရှုနိုင်သည့် နည်းပညာထွက်ပေါ်လာ
ဘေးရန်အပေါင်းကို အောင်နိုင်စေမည့် လက်စွဲဂါထာတော်
ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး ဆုံးခဲ့ရပေမယ့် ဇွဲမလျော့ပဲ ဧဝရတ်တောင်ထွဋ် ရောက်အောင်တက်ခဲ့သူ
ဇွဲ လုံးဝမလျှော့တဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီး အသက် ၉၆ နှစ်မှာ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီ
Live Show ညမှာ အလဲထိုးခံလိုက်ရတဲ့ မျိုးကျော့မြိုင်
ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်နဲ့ နေထက်လင်း စင်ပေါ်ကပြုတ်ကျ
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကလူနာများအတွက် မနက်စာလှူတန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ခန္တာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်အောင် လှစ်ဟပြခဲ့တယ့် သင်ဇာဝင့်ကျော်
၁၅ နှစ်ကျော်ကြာပျောက်နေတဲ့ Tomb Raider ပြန်လာပြီ(ရုပ်သံ)
တီဗီရုပ်သံလိုင်းများကို HD အကြည်လင်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနည်း
The Voice Myanmar ကို အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်း
မက္ကဆီကိုအသင်းက လက်ရှိချံပီယံ ဂျာမဏီအသင်းကို အနိုင်ယူ
ကမ္ဘာ့အရက်စက်ဆုံး ဘောလုံးအားကစားနည်း “ကာလ်ချို စတိုရီကို”
Police Tero FC အတွက် အနိုင်ဂိုးကို အောင်သူ သွင်းယူ
အောင်လအန်ဆန်းကိုယ်တိုင် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ချံပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ
MMA ကစားသမားဖိုးသော်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး MMA သင်တန်းဖွင့်
ဗျူနိုအေရိစ်တွင် ဂုဏ်ပြုထားသော မက်စီ၏ပုံတူရုပ်တု ဒုတိယအကြိမ်ဖျက်စီးခံရ
ဂဏန်းပေါင်းစက်ထက်မြန်တဲ့ မြန်မာလူငယ် သင်္ချာဉာဏ်ကြီးရှင်
အဆိုတော်တွေ ထိုင်ငိုသွားမယ့် The Blind Dream
ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြိုးချည်ကာစင်ပေါ်တက်လာတဲ့ Emojix အဖွဲ့
ကိုယ်တိုင်လေ့လာထားတဲ့ မျက်လှည့်ပညာကို ပြသသွားတဲ့ ၁၃ နှစ်သားလေး
Winner ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိပြီးကြပြီလား?
အားလုံးရှော့ခ်ရခဲ့တဲ့ Result Show
အမြင့်ဆုံးရင်ခုန်သံတွေနဲ့ Duet Theme
လူသေအမျိုးသမီးကို လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အမျိုးသားသူနာပြုအား ဖမ်းဆီး
Family Feud (Episode 114)
Family Feud (Episode 111)
ရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါဖောက်လာရင် တစ်မိနစ်အတွင်း အသက်ကယ်နည်း
27 Dec 2016 510 Views
ရုတ်တရက် နှလုံးရောဂါ ဖောက်လာခြင်း (Heart Attack) ဟာ များသောအားဖြင့် အဟာရချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစားအစာတွေကို စားနေပေမယ့်လည်း အဟာရဓါတ် မပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နှလုံးရောဂါ ဖောက်လာတဲ့အခါ နှလုံးပုံမှန် အလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ အတွက် တစ်ကယ့်အစာအဟာရကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့်အရာကို ချက်ခြင်း ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဂျွန်ခရစ္စတိုဖာက သူ့ရဲ့ လုပ်သက် ၃၅ နှစ်လုံးလုံး Heart Attack လူနာတွေကို ဖော်ပြပါနည်းနဲ့ ကယ်တင်ခဲ့ရာမှာ အားလုံးအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ရေနွေးကြမ်းပူပူ တစ်ခွက်ထဲကို ငရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာ ထည့်ရောမွှေပြီး လူနာကို တိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လူနာဟာ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေနွေးကြမ်းပူပူက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ရဲ့ စွမ်းအားက တွန်းပို့တဲ့အတွက် နှလုံးကို တိုက်ရိုက်ထိရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းဟာ သောက်ဆေးတွေ ထက်တောင် တုံ့ပြန်မှုက ပိုမိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ယခုနည်းလမ်းကို သိထားခြင်းဖြင့် Heart Attack လူနာတွေရဲ့အသက်ကို သေချာပေါက် ချက်ချင်းကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမွှာပူးမွေးဖွားမယ့်ကိုယ်ဝန် ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေ
အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ၂၇ ပေရှည်သည့် စပါးအုံးမြွေက အရှင်လတ်လတ်မျို
ဆေးရုံပေါ်မှာ ယောက္ခမနဲ့ ဇနီးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစီရင်
ရွှေဆိုင်နှင့် အပေါင်ဆိုင်တို့မှ ရွှေလိမ်လည်သူ အမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရမိ
အပျော်လွန်ပြီး ပလပ်ကျွတ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်ပရိသတ်များ